Darpan Nepal – OMG डिसलाईक सेलिब्रेटी मीनाको गीतमा ,हट सोनीका पहिलो पटक गुन्युचोलीमा (भिडियो)
OMG डिसलाईक सेलिब्रेटी मीनाको गीतमा ,हट सोनीका पहिलो पटक गुन्युचोलीमा (भिडियो)
May 17, 2018adminEntertainment0Like
पहिलो पटक सोनीका रोकाय गुन्यु चोलीमा प्रस्तुत भएकी छिन् । यी २ आफ्नो आफ्नै शैलीबाट चर्चित छिन्, अब यो गीतको भिडियो सार्बजनिक भएपछी कतिको डिसलाईक र सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने हो ? त्यो भने हेर्न बाकि नै छ ।
डिजिटिल दुनियाको युट्युबमा लाईक भन्दा डिसलाईक बढि पाउने सेलिब्रेटिमा पर्छिन मिना ढकाल । केहि समय अगाडि हास्यकलाकार मनोज गजुरेल संग सम्बन्ध बिच्छेद गरेपछि उनि मिडियामा एकाएक चर्चा संगै बिबादमा आईन ।
यति मात्र हैन उनको खिल्ली उडाउनेहरुको ताती नै लाग्यो । हालै उनले ‘म हु नेपालि छोरी’ बोलको नया गीत तयार गरेकी छिन् । यसअघि उनले केहि गीतहरु पनि सार्बजनिक गरिन तर हास्य पात्र मात्र बनिन । हाल यसको म्युजिक भिडियो छायांकन समेत भैसकेको छ । हेर्नुस् भिडियो ।
जसमा पहिलो पटक सोनीका रोकाय गुन्यु चोलीमा प्रस्तुत भएकी छिन् । यी २ आफ्नो आफ्नै शैलीबाट चर्चित छिन्, अब यो गीतको भिडियो सार्बजनिक भएपछी कतिको डिसलाईक र सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने हो ? त्यो भने हेर्न बाकि नै छ ।
Previous Postआज २०७५ साल जेठ ४ गते शुक्रबार, तदअनुसार मे १८, २०१८ – हेर्नुस आजको राशिफल Next Postअण्डै नबनी कुखुरा कसरी त ?(भिडियो हेर्नुहोस् )